တရုတ် လေ Strut A8 D3 4E0616002N စက်ရုံ နှင့် ထုတ်လုပ်သူများ - ကွမ်ကျိုး Junshang ကုန်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီလီမိတက်။
လေ Strut ဘို့ အော်ဒီ
လေ Strut ဘို့ ဘီအမ်ဒဗလျူ
လေ Strut ဘို့ Hyundai
လေ Strut ဘို့ Jeep
လေ Strut ဘို့ မြေ Rover
လေ Strut ဘို့ Mercedes-Benz
လေ Strut ဘို့ Porsche
လေ Strut ဘို့ VW
လေ Strut ပြုပြင်ပါ ပစ္စည်းများ
ရော်ဘာ လက် ဘို့ လေ Strut
လေ ဆိုင်းငံ့မှု တွန်း
လေ Suspensin တွန်း ဘို့ အော်ဒီ
လေ Suspensin တွန်း ဘို့ ဘီအမ်ဒဗလျူ
လေ Suspensin တွန်း ဘို့ Mercedes-Benz
လေ Suspensin တွန်း ဘို့ VW
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လေ Strut > လေ Strut ဘို့ အော်ဒီ > လေ Strut A8 D3 4E0616002N
လေ Strut Q7 7L8616040D
လေ Strut Q7 7L8616039D
လေ Strut A8 D4 4H0616002N
လေ Strut A8 D4 4H0616039AE
လေ Strut A8 D3 4E0616002N
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း လေ Strut A8 D3 4E0616002N ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် လေ Strut A8 D3 4E0616002N
Audi A8 2004-2010 နောက်ဘက်ညာဘက်အတွက် JunshangAir ကို Strut A8 D3 4E0616002N
Junshang လေယာဉ်ရပ်နား A8 D3 4E0616002N ကိုအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ထုံးစံအတိုင်းညှိထားသောအလျင်အထိခိုက်မခံသော shock absorber ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။ စံကိုက်ညှိပြီးနောက်လေယာဉ်ရပ်နားမှုအသစ်သည်သင်၏မော်တော်ယာဉ်၏မူလလေယာဉ်ရပ်နားမှု strut ကိုအစားထိုးနိုင်သည်၊ ကား၏တုန်ခါမှုကိုပိုမိုထိရောက်စွာလျှော့ချနိုင်သဖြင့်ကားမောင်းခြင်းနှင့်စီးနင်းခြင်းစွမ်းရည်ကိုကောင်းမွန်စေသည်။
Junshang လေကွောင်းများကိုကွမ်ကျိုးတရုတ်နိုင်ငံ၊ မူရင်းအရည်အသွေး - စျေးနှုန်းနှင့်တစ်နှစ်အာမခံချက်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
Air Spring ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း / Shock / Strut
Air ကို Strut A8 D3 4E0616002N
အမှတ်တံဆိပ်အသစ် / ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း
4E0616002L, 4E0616002A, 4E0616002H, 4E0616002, 4E0616002F, 4E0616002P, 4E0616002
လူမီနီယမ် + သံမဏိ + ရော်ဘာ
အားကစားရပ်ဆိုင်းမှု w / w 2004-2010 Audi A8 D3
Audi A8 2004-2010 နောက်ဘက်ညာဘက်အတွက် JunshangAir ကို Strut A8 D3 4E0616002Nအရည်အသွေးမြင့်ပစ္စည်းများနှင့်အတူဆောက်လုပ်ထားသည်။ တာရှည်ခံတံဆိပ်များ၊ လူမီနီယမ်အထက်အဖုံး၊ အနိမ့်ပစ္စတင်၊ အိုကွင်း၊ အဆုံမှတ်တိုင်၊ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းသောကွင်းများ၊ လေအေးပေးစက်အသစ်၊ connector အဆို့ရှင်၊
၂ ။Professional အော်တိုအစိတ်အပိုင်း။
၄ ။ လုံခြုံမှုနှင့်ကြာရှည်ခံမှု။
၅ ။Compact ဒီဇိုင်း။
အသုံးချရန် 6.Long ။
7.1 နှစ် Free warranty.
Junshang သင်္ဘောတင်သင်္ဘော UPS TNT DHL ။ ကုန်းလမ်း၊ လေနှင့်ပင်လယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့သည် T / Tï¼ŒPAYPAL၊ VISA၊ Western Union သို့မဟုတ်အခြားသဘောတူထားသည့်အတိုင်းလက်ခံသည် ငွေပေးချေမှု၏နည်းလမ်းများ။
T / T သည် 30% သိုက်အဖြစ်နှင့် 70% မပို့မီ။
ဟုတ်တယ်၊ နမူနာကိုငါတို့ထောက်ပံ့နိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဖောက်သည်တွေကပေးရတယ် နမူနာကုန်ကျစရိတ်နှင့်курьерကုန်ကျစရိတ်။
EXW, FOB, CFR, CIF, DDU ။
၄ ။သင်အညီထုတ်လုပ်နိုင်သလား နမူနာလား
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်မှိုများကိုတည်ဆောက်ပြီးသင်၏နမူနာများဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းများထုတ်လုပ်နိုင်သည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရေးဆွဲ။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှို၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုပေးရန်ဖောက်သည်လိုအပ်သည်။
1 နှစ် Free warranty. Warranty time is calculated from the day you receive the goods.
hot Tags:: လေ Strut A8 D3 4E0616002N, တရုတ် စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများ ပေးသွင်းသူများ, လုပ်သည် in တရုတ်
လေ Strut A8 D34E0616002N
လေ Strut A8 D3 4E0616001N
လေ Strut A8 D3 4E0616040AF
လိပ်စာ: 106 Fengze အရှေ့ လမ်းမ Nansha ခရိုင်, ကွမ်ကျိုး
ဘို့ စုံစမ်းရေး အကြောင်း ငါတို့ ထုတ်ကုန်များ ဒါမှမဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်း ကျေးဇူးပြု ထွက်ခွာသွားသည် yငါတို့ အီးမေးလ် ရန် ငါတို့ နှင့် ငါတို့ အလိုတော် ဖြစ်လိမ့်မည် in ရန်uch အတွင်း 24 hငါတို့s.
လေ Strut အမှား စမ်းသပ်မှု2019/09/10
လေ Strut ဟုတ်တယ် က frကgile ကccessory in က လုပ်ငန်းစဉ် ၏ အသုံးပြုခြင်း က cကr. The ဆီ leကkကge ၏ က ထိတ်လန့်ခြင်း ကbsorber ကnd က dကmကge ၏ က ရာဘာ အလိုတော် တိုက်ရိုက် ကffect က stကbility ၏ က cကr ကnd က ဘဝ ၏ oကr pကrts.
လေ Strut ဘို့ Porsche2019/09/10
လေ Strut ဘို့ Porsche အသုံးပြုမှု အရည် ရန် ပြောင်းလဲ က နွေ ဦး elကstic စွမ်းအင် inရန် အပူ, ဘယ် မိတ်ကပ် က မော်တော်ယာဉ်ရဲ့ လှုပ်ရှားမှု convergence က အများဆုံး ဆင်ခြင်တုံတရား, ထို့ကြောင့် ဖျက်သိမ်းရေး က တုန်ခါမှု ဖြစ်ရတဲ့ က က လမ်း မျက်နှာပြင် နှင့် တိုးတက်လာသည် က မောင်းနှင်မှု တည်ငြိမ်မှု, ပေးကမ်းခြင်း က ကားမောင်းသူ က အသိ ၏ နှစ်သိမ့်မှု နှင့် stကbility.
မူပိုင်ခွင့် @ 2019 ကွမ်ကျိုး Junshang ကုန်သွယ်ရေး Co. , Ltd. အားလုံး အခွင့်အရေး ကြိုတင်ကာကွယ်ထားသည်